'Fahavaratra fahavoazana' - Andian-tantara vaovao Amazon Prime | Bezzia
Susana godoy | 20/07/2021 14:00 | ankehitriny
Marina fa na dia ny ankamaroan'ny ankamaroantsika aza dia tia fahavaratra, indraindray tsy misy safidy tsara toy izany amin'ny tantara foronina. Efa hitantsika tamin'ny fotoana maro ny tsy fahombiazan'ny vanin-taona mafana araka ny antenaina. Araka izany, Amazon Prime miloka amin'ny fientanam-po vaovao izay hahasarika anao.
Andiany iray mitondra ny lohateny hoe 'Fahavaratra fahavoazana' ary manana zavatra maro holazaina amintsika izy. Safidy mety hialana voly rehefa miakatra ny hafanana ary tsy afaka miala ny trano na ny toerana fialan-tsasatrao ianao. Azo antoka fa hisafidy ny hampiala-tena toy izao ianao. Te hahafantatra bebe kokoa?
1 Ny famokarana 'fahavaratra feno herisetra'
2 Iza ireo mpiady amin'ny 'Fahavaratra fahavoazana'?
3 Izay ho hitantsika ao amin'ilay andiany 'Fahavaratra fahavoazana'
4 Rehefa manomboka amin'ny Amazon Prime
Ny famokarana 'fahavaratra feno herisetra'
Ny anarana malaza toa an'i Jessica Biel dia efa miala amin'ny famokarana. Eny, nanapa-kevitra ny handeha ao ambadiky ny seho ilay mpilalao sarimihetsika taorian'ny nijanonany tao amin'ny The Sinner. Fahombiazana, izay nandritra ny vanim-potoana voalohany dia nifantoka tamin'ny toetrany ary nahazo fanamarihana mahafinaritra. Marina fa ny sanganasan'i Biel dia efa afaka isaina am-polony am-polony sy ny fahombiazany ihany koa. Ka, azo antoka izao fa tsy ho tavela any aoriana ianao. Saingy tsy tonga irery izy, fa miaraka aminy koa i Michelle Purple. Hevitra roa lehibe sy fifantohana mazava hamelomana andian-tantara amin'ny Amazon Prime izay hampiaiky volana anao.
Iza ireo mpiady amin'ny 'Fahavaratra fahavoazana'?
Na dia tena zava-dehibe aza ny ampahany amin'ny famokarana, ireo mpiaro ny andian-dahatsoratra dia tsy lavitra aoriana koa. Satria amin'ity tranga ity dia izy ireo no hamolavola azy. Manomboka amin'ny Olivia Holt, izay mpilalao sarimihetsika sy mpihira izay efa hitantsika tamin'ny andiany Disney Channel, hatramin'ny nanombohany ny asany tamin'ny fahazazany. Etsy ankilany dia eo koa i Chiara Aurelia, mpilalao sarimihetsika amerikanina. Michael Landes, izay hitantsika tao amin'ny Final Destination 2, Froy Gutiérrez, Harley Quinn Smith na Blake Lee dia ho anisan'ireo hitanao isaky ny toko.
Izay ho hitantsika ao amin'ilay andiany 'Fahavaratra fahavoazana'
Ny marina dia andian-tantara izay tsy misy ifandraisany amin'ireo andian-tantara mampihetsi-po hafa. Satria amin'ity tranga ity Hifantoka amin'ny folo taona 90 ary hitantara fahavaratra 3. Ao amin'io no hilazana amintsika tranga iray mahatsiravina dia ny fanjavonan'ny tovovavy iray. Saingy rehefa mitranga ny fanjavonana dia lasa iray amin'ireo malaza indrindra ny tovovavy iray hafa. Midika izany fa toa mibodo ny toeran'ilay zazavavy tsy hita izy io. Na dia toa tsy nisy fifanandrifian-javatra be loatra aza teo anelanelan'ny roa, dia tsy ny volamena rehetra ihany no mamiratra. Ity tovovavy noresahinay ity dia toa iray amin'ireo tovovavy mahafatifaty indrindra, saingy nivadika ho mifanohitra amin'izany izy. Mazava ho azy, mandra-pahitantsika ny andian-dahatsoratra dia tsy ho fantatsika ny anton'io fihetsika io.
Ankehitriny manana ny teti-dratsy isika, Inona no tsy itovizany amin'ity andiana Amazon Prime ity? Na dia ampahany ao aminy aza ny tsiambaratelo sy ny fanentanana, dia tsy io andinindininy io ihany. Fa ny fizarana tsirairay izay ho hitantsika dia hifandraisany amin'ny fomba fijery samy hafa. Amin'izay ihany, angamba, hahatakarantsika kely kokoa ny hevitra tsirairay sy ny fototry ny tantara. Ka ho an'izay fotsiny dia angamba efa fantatsika fa ho teti-dratsy hanantona antsika toy ny teo aloha izy io. Tsy mieritreritra ve ianao?
Rehefa manomboka amin'ny Amazon Prime
Tokony holazaina fa hahita fizarana 10 amin'ity andiany ity isika. Azontsika jerena izy ireo manomboka amin'ny zoma 6 aogositra. Eo ianao dia efa manana fotoana miaraka amin'ity tantara ity izay toa tsy mamela anao tsy hiraharaha. Hanomboka amin'ny a fizarana pilote notarihin'i Max Winkler. Mazava ho azy fa efa mikendry fahombiazana lehibe io. Hametraka ny 'Fahavaratra fahavoazana' amin'ireo tianao indrindra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Amazon Prime dia miloka amin'ilay nampihetsi-po tamin'ny 'fahavaratra feno herisetra'
Tombony azo amin'ny bisikileta